CORONAVIRUS MANERAN-TANY Maneran-tany 4000 mahery ny maty tao anatin’ny 24 ora
Coronavirus Nasongadina ny sitrana, nodian-tsy hita ny maty
Tena faly aho androany, tena faly ny fo ary misaotra an’Andriamanitra fa misy vaovao tsara hoentina amintsika satria tsy nisy ny aina nafoy,
Lapan’Anosikely Nanao fitiliana ireo Loholona sy ny mpiara-miasa
Notanterahina omaly talata 08 jolay 2020 teo amin’ny Lapan’Anosikely ny fitiliana mahakasika ny valan’aretina Covid-19 ireo Loholona sy ny mpiara-miasa sasantsasany.
Depiote Rakotomalala Lucien Ofisialy fa coronavirus no nahafaty azy
Efa nampiseho fahasarotana na “forme grave” ny depiote Lucien Rakotomalala no noraisina teny amin’ny Hopitaly Hopitaly Miaramila na ny HOMI
Frantsay iray lavon’ny Covid-19 Samia mailo, hoy ny Ambasadaoro Christophe Bouchard
Tamin’ny fampitam-baovao nataony ny 7 jolay 2020, miantefa amin’ireo teratsay frantsay eto Madagasikara, no nanambaran’i Christophe Bouchard,
Fiarahamonim-pirenena “Aza salovanina ny asan’ny mpitsabo”
Naneho ny fankasitrahany ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana manoloana ny famerenana ny fihibohana manomboka amin’ny 12 ora tolakandro eto Analamanga ny hetsiky ny fiarahamonim-pirenena Rohy omaly. Tsy hahomby anefa, hoy izy ireo,
67 HA, Ambohimanarina, Alasora Maditra ny olona, mbola misy mandehandeha hariva ihany
Nidina ifotony teny amin’iny faritra 67 ha Avaratra-Atsinanana, FTA, IVO, Antohomadinika Avaratra ary Ankasina ny
Village Voara Andohatapenaka Mitombo isan’andro ny olona manao fitiliana
Tamin’ny 2 jolay dia 159 teo ny olona no tonga teny amin’ny Village Voara Andohatapenaka, ka nisy ny tsisy soritraretina ary tao no nisy soritr’aretina ary nahitana olona tena nahiana mafy ny fahasalamany na « forme grave», hoy ny Dr Manitra Rakotoarivony.
Raha notaterintsika teto omaly fa 35 905 ireo matin’ny coronavirus maneran-tany, dia tafiakatra efa tafiakatra 40 057 indray io, izany hoe 4156 tao anatin’ny iray andro monja ny fitomboana, ary lojika sy heverina ho mbola nihoatra an’io aza.
Ny firenena Italianina no mitana ny lohalaharana amin’ny maty be indrindra satria efa tafiakatra 12 428 izany amin’izao fotoana izao. Maherin’ny 800 000 ireo olona voa eto ambonin’ny tany.
Maorisy sy Mayotte
Miisa 5 ireo maty
Tafiakatra 4 ny olona maty tatsy amin’ny Nosy Maorisy, izay efa tapa-bolana teo ho eo izay ny roa ary tranga vaovao ny roa ambiny. Tafiakatra 143 ireo voamarina fa mitondra ny Covid-19 ao amin’ity nosikely tsy lavitra antsika ity, ka ny 16 amin’ireo dia tranga vaovao hita omaly. Miisa 94 kosa ireo trangan’aretina voamarina atsy amin’ny nosy Mayotte. Nanao fanambarana ny tomponandraikitra ara-pahasalamana ao an-toerana omaly, fa nisy olona iray matin’ity Covid-19 tao amin’ity nosy ity ao anatin’ny departemanta Frantsay ity. Io no fahafatesana voalohany tany an-toerana. Tany Tanzania ihany koa dia omaly no nisy olona maty voalohany, raha toa ka 19 ireo voamarina fa mitondra ny Covid-19 amin’izao fotoana izao.
1729 no maty tao anatin’ny andro iray
Tafiakatra 849 no namoy ny ainy tany Espagne tao anatin’ny 24 ora, ka manome ny tambatr’isa 8 189 ho an’ireo namoy ny ainy tao amin’ity firenena ity. I Espagne rahateo no laharana faharoa amin’ny firenena be maty indrindra. Ho an’ny tany Frantsa kosa dia 499 no isan’ny maty tao anatin’ny iray andro ihany koa, ka tafiakatra 3523 ireo namoy ny ainy hatramin’izay, ary 5564 mahery ao amin’ny sampana fameloman’aina n any “reanimation”. Mbola any Eoropa ihany, dia 381 no maty tao anatin’ny 24ora, ka manome ny isa ho 1789.
Tovovavikely 12 taona maty
Tovovavikely vao 12 taona no namoy ny ainy tany Belgique omaly. Tranga sokajiana ho tsy dia fahita na “rare” ho an’ny salan-taona tahaka izany. Tranga tsy dia fahita saingy tsy azo nihodivirana, hoy I Emmanuel André mpitondra tenin’ny manam-pahefana. Telo andro izay no nisy fanaviana izy ary voamarina fa voan’ny covid-19, hoy ny fanazavana. Vao andro vitsy izay no nisy ilay tovovavikely antsoina hoe Julie vao 16 taona no namoy ny ainy tany Frantsa, ary ity izany ny tranga faharoa mitovitovy amin’izany.
Haharitra hatramin’ny faran’ny taona ?
Miketrika hanana fahaleovantena feno sy manontolo I Lafrantsa amin’ny tapim-bava hiatrehana ny coronavirus. Manomboka izao hatramin’ny faran’ny taona, dia kendrena ho ny fireneny ihany no hamokatra ny tapim-bava ho azy ireo, hoy ny Filoha Frantsay Emmanuel Macron omaly. Amin’ny faran’ny aprily dia hahavita tapim-bava sy “respirateurs” 10 tapitrisa izy ireo ary hampitomboina ny ezaka, raha ny nambaran’i Emmanuel Macron raha nitsidika ny orinasa iray dia ny Kolmi-Hopen any amin’ny faritr’i Angers ny tenany. Marihina fa nanafatra tamin’ny sinoa ny Frantsay. Ny mampametra-panontaniana dia hoe: mihevitra ve ny Frantsay na ny firenen-dehibe hafa fa mbola haharitra hatrany amin’ny faran’ny taona vao tena ho fongana na voafehy sy misy vahaolana mafonja sy azo tsapain-tànana ny coronavirus?
Sazy hafakely, tsy an-kitsitsy
Tao anatin’ny herinandro dia maherin’ny 1 miliara ny Indianina tsy mihiboka, tsy afaka mivoaka ny trano mba hisorohana ny fipariahan’ny coronavirus. Mba hanajana izany, dia mampiasa hery mihitsy ny mpitandro filaminana. Miteraka adihevitra satria mety higadra herintaona an-tranomaizina ny olona tsy manaja ny fihibohana. Asaina mandady na “à quatre pattes” tahaka ny saka na alika. Asaina manao paompy, ary darohan’ny polisy amin’ny “baton”. Aiza ho aiza amin’izany ny aty Madagasikara?
Tsy miova ny fandaharam-potoana hatreto
Mitsahatra tanteraka ny fanatanjahantena amin’izao fotoana izao. Tena ao anatin’ny fotoan-tsarotra, hoy ny Filohan’ny Kaonfederasionina Afrikanina momba ny baolina kitra Ahmad. Nanao fandalinana ny CAF, ary manaraka ny toromariky ny OMS, hoy izy tamina fampahalalam-baovao vahiny iray. Tsy maintsy nahantona ny fifanintsanana hiakarana amin’ny CAN 2021 tokony natao tamin’iny faran’ny martsa iny. Miandry ny fivoaran’ny coronavirus, fa amin’izao fotoana hitenenako izao aloha, dia mbola voatazona ho amin’ny janoary-febroary 2021 ho avy io ny CAN 2021, hoy I Ahmad, izay eto Madagasikara amin’izao fotoana izao.